Ukubonisa Ngokulandela Kwethu Ngothando kanye ...
Khumbula amagama abo kanye namagama wamalungu yemindeni yabo futhi wakhe ubuhlobo nabo. Bathande ngaphandle kokuba ubahlulele. Baqaphe futhi uqinise ukholo lwabo “ngamunye ngamunye,” njengoba uMsindisi enza ( 3 uNifayi 11:15 ).
ukuze kubhekwane nalesisifo. Ngokwelekelelwa ngozakwabo, kanye nemishanguzo elidambisayo leligciwane (ARV’s), babekwazi ukuphila impilo engcono, beqhubeka nokusebenza, baphinde belekelele ngokuthe xaxa ekusizeni abanye. Ngalesisizathu, u-Anna wayenakekeleke kahle endaweni, ezinakekela naye aphinde anakekele nabanye ngenkuthalo enkulu.
Umsebenzi wabo ukuthola, emuva kokukhuluma kukaNkulunkulu, lokho okumele bakwenze noma bangene kukho, bese bakudlulisele kubalandeli. Ngakho, umsebenzi womuntu umela ukungena nokusebenza kwakhe. Nakanjani, umsebenzi onjalo uxutshaniswe nezifundo zomuntu kanye nalokho ake abhekana nakho noma neminye imicabango yomuntu.
KUPHAZAMISILE UKULUNGISWA KWESIKOLE - eHowzit
KUPHAZAMISEKE izinhlelo zokuqala ukufunda kanye nokufundisa esikoleni samabanga aphakeme eBhobhoyi ngosuku lokuvulwa kwezikole ngenxa yokulungiswa kabusha kwesikole nokwakulindeleke ukuba ziyovulwa izikole sekuphelile.
izinga lazo, okubandakanya nokusebenza kwazo, kuyashintsha yini ezikhungweni zemfundo ephakeme. Okwesibili, iphepha lizobheka iqhaza elibanjwe iminyango yezilimi njengabanikazi balokho okufundiswayo nokucwaningwayo ngezilimi zomdabu zase-Afrika kulo mkhankaso wokusetshenziswa kwezilimi emikhakheni eyahlukene.
UKUXAZULULA UKUHLUKUNYEZWA NGOKWECANSI: …
UKUXAZULULA UKUHLUKUNYEZWA NGOKWECANSI: UMQONDISI WEZINGANE, IMINDENI KANYE NAMALUNGA WOMPHAKATHI Sithanda ukubonga labantu abalandelayo ngoxhaso lwabo kanye nosizo abalufake ekuhlanganiseni lenncwadi: Claire Avidon, Jes-sica Searle Fonzi, Mark Heywood, Kay Mahonde, Bonita Meyers-feld, Ariane Nevin, Nthabi Pooe, Nikki Stein and Shayda Vance
IPHEPHA LOKUQOQA IMIBONO NGOKUSHINTSHWA KOMHLABA, 2011 olushintshiwe lwezwe. Ukungenzi kanjalo kuzoqhubela phambili ukuhlukana kwamanje komphakathi kanye nomnotho kanye nokungathuthuki kahle.
Sokumisiwe Ukulungiswa Kwemigwaqo Obekumele Isetshenziswe ...
Sokumisiwe ukulungiswa kwemigwaqo edolobheni leGwanda obekuqale ngesiphangiphangi kumaviki amabili ayedlulileyo kulungiselelwa umhlangano webandla leZanu PF owe National People’s Conference obukhangelelwe ukuqhutshwa kulelo dolobho ngoMpandula. Lokhu kulandela inyathelo lebandla leli lokuqhuba umhlangano omkhulu oweCongress eHarare.
pre: i-crusher edayiswa ku-tokelau
next: thengisa i-limestone prisitshalo esiphathekayo
ukulungiswa ngaphambi kokuthola igolide le-mecury
ukulungiswa kwempahla eluhlaza kwesitshalo samamenti
isikhwama se-crusher ukulungiswa